मृत्युको पर्खाइमा डेढ शताब्दी पुरानो दरबार हाई स्कुल « Khasokhas Follow @khasokhasmag
मृत्युको पर्खाइमा डेढ शताब्दी पुरानो दरबार हाई स्कुल
२०७२ बैशाखमा भएको बिनासकारी भूकम्पले भौतीक संरचना मात्रै भत्काएन अतुलनिय मानविय क्षती पनि पुर्यायो । ५ लाखको हाराहारीमा भौतिक क्षती हुंदा इतिहास बोकेका थुप्रै सम्पतीहरु क्षतबिक्ष्ँत भए ।
जस्ले मानव देखि भगवानको मन्दीर सम्म असर पुर्यायो, जसको उदाहरणहरु दिइ साध्यै छैन । कुनै समय राजधानीको सान बनेको दरबार हाई स्कुल भुकम्प संगै संकटको सामना गरिरहेको छ । भोटाहिटीमा रहेको दरबारहाइ स्कुलको राणाकालीन भवनमा भूकम्पीय बिपद्ले क्षति पुर्याउंदा दिर्घकालीन असर देखिएको छ ।
बिक्रम संबत १९१० सालमा स्थापना भएको दरबारहाई स्कुलले उत्पादन गरेका धेरै जनाले राष्ट्रिय ब्यक्तित्वको स्थान लिए तर स्कुल भने ब्रम्हनालमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । दरबार हाइ स्कुल आफैमा शिक्षकको ज्योती पुंज पनि हो जस्ले सामन्तबादको अन्त्य गराउंदै जनताको छोरा छोरीलाई शिक्षीत बनायो । तर हिजो आज स्कुलको इतिहास मेटिंदै छ र अस्तित्व गुमाउंदै छ ।
राजधानी काठमाडौंको मुटु रानीपोखरीको छेवैमा रहेको ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुल जिवीत इतिहास हो । राणा प्रंधानमन्त्री जंगबहादुरले अंग्रजी शिक्षाको आबश्यकता महशुस गरी सुरु गरेको दरबार हाइस्कुलको अहिलेको अबस्था हेर्ने हो भने सोही बिद्यालयबाट शिक्षा लिएकाहरुको मन कुंडिने छ । कुनै जमानाको चर्चित स्कुलको वर्तमान भने कहाली लाग्दो बनेको छ । अझ भनौं, नेपालका धेरै सामुदायिक स्कुलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने यो स्कुलले भानु माविको नाममा आफ्नो डुब्दै गरेको अस्तित्व खोजिरहेको छ ।
इतिहास मेट्दै अगाडी बढेको आधुनिक सोचको उदाहरण हो दरबार हाईस्कुल । राजनीतिक परिर्वतनको थिचोमिचोमा परेको धरोहर मध्येको नमुना बनेको हाई स्कुलको हाईट जोगाउन यतिबेला कसैले ध्यान दिएका छैनन् । वास्तबिकतामा टेकेर बोल्ने हो भने आधुनिक शिक्षाको सिकार बनेको छ नेपालकै जेठो बिद्यालय । होइन भने किन गणतन्त्रका हिमायतिहरुले दरबारहाइ स्कुलको महत्व र गरिमा जोगाउन अलिकती पनि ध्यान दिएनन् ।
राणकालीन समयमा थापाथली स्थित दरबारबाटै सञ्चालनमा आएको बुढो बिद्यायलले अनगीन्ति नेता,साहित्यकार तथा कुटनितीज्ञहरु जन्मायो तर उनिहरुले आफुलाई अब्बल बनाउने बिद्यालय जोगाउन कुनै पनि भूमिका निर्बाह गरेनन् । यस अर्थमा बिद्यालयले उत्पादन गरेको पुस्ता बालुवामा पानी हाले बराबर भयो । दरबार हाई स्कुलको इतिहास धेरैलाई जानकारी छैन । बि सं १९१० सालमा स्थापना भएको यो बिद्यालय कसरी इतिहास रच्न सफल भयो र अहिले कसरी आफ्नै इतिहास जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ ?
हामी कहां बिकास भन्दा बिनास धेरै भैरहेका छन् । राणा साशनले भौतिक संरचना नबनाइदिएको भए प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र र गणतन्त्रले के भत्काउंथ्यो होला ? यस्ता थुप्रै संरचनाहरु छन् जुन आधुनिकता र प्राकृतिक प्रक्रोपको सिकार भैरहेका छन् । हामीले दरबारहाई स्कुललाई राज्यले उपेक्षा गर्यो भन्यौ भने सिंहरबारले नै साशकलाई गिज्याइ रहेको छ ।
२०१२ सालमा रानी पोखरी छेउमा बनेको हालको दरबार स्कुल राणाका छोरा छोरीलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिने उद्धेश्यले बनाइएको थियो तर बिस्तारै सर्बसाधारणको लागि पनि खुल्ला गरियो जुन आजको दिनमा मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । राणा शासनकालमा जनताका छोराछोरीले शिक्ष्ाँ लिनु वा बिद्यालय जानु अपराध गर्नु थियो ।
जनताका छोरा छोरी शिक्षीत भए आफ्नो शासन कम्जोर हुन्छ भन्ने सामन्ती सोचले ग्रसित राणाहरुको सोच भत्काउन धेरैले ज्यानको बलिदानी दिनु पर्यो तर आज सोही बिद्यालय उपेक्ष्ाँको शिकार बन्दा बचाउनु पर्छ भन्ने भेट्नै मुस्किल परेको छ । राणा शासनको संकुचित सोचबाट बाहिरिएको दरबारहाई स्कुलबाट सर्वसाधारणले लिएको लाभ ब्याख्या गरि साध्यै छैन । त्यसको बदलामा राजनितीक नेतृत्व र आम नागरीकले बिद्यालयलाई गरेको ब्यबहार भने टिठ लाग्दो छ ।
देशको वास्तबिकता बुझने हो भने देशलाई यो हालतमा पुर्याउनेहरुलाई धिक्कार्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिंदैन र भन्न्ो गर्छन यो त सतिले सरापेको देश हो । दोस अन्यत्र थुपर्दै आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रबृत्तिको सिकार हुंदा भएका संरचनाहरु मासिंदै गएकाछन् देश दिनप्रतिदिन खुइलिइरहेको छ ।
१५० बर्षको इतिहास बोकेको सरस्वतीको मन्दीर भत्कंदा बनाउन नसक्नेले देश बनाउलान् भन्ने आशा गरियो भने भूल हुने छ । अहिलेको नेतृत्वले संस्कार बिर्षीएको छ, धर्म छाडेको छ , इतिहास मेटाउंदै छ जस्कालागि दरबारहाई स्कुलको अहिलेको हविगत हेरे पुग्छ । दरबारहाई स्कुले अब कति समय रहला दैव जानुन् भन्ने अवस्था आउंदा पनि राज्यको आंखा नखुले कहिले खुल्ला ? अब पनि दरबार स्कुलले बिगतमा खेलेको भूमिका नसम्भने हो भने आजका पुस्ताले खेलेको भूमिका भोलीका पुस्ताले किन सम्झने ? किन सुरक्षित गर्ने ? दरबार स्कुलले बनाएको इतिहास मेटाउंने हो भने तिमीले लेख्दै गरेको इतिहास कस्ले बचाउला ?